प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत माग्दा व्यक्त गरेको मन्तव्य (जस्ताको तस्तै) – ThePressNepal
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत माग्दा व्यक्त गरेको मन्तव्य (जस्ताको तस्तै)
संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको मर्म बमोजिम ११ वटा मन्त्रालय र निर्देशनालय, केन्द्र तथा प्रतिष्ठान, जिल्लास्थित कार्यालय समेत १६१ वटा कार्यालयहरु तथा २,९०० जती कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारका सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारण सहमतिमै गरी उदाहरणीय राजनीतिक सन्देश दिइएको छ ।
वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रु १ खर्ब ८८ अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६.६० प्रतिशतले बढेर रु २ खर्ब २० अर्ब पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३९.७२ प्रतिशतले बढेर रु ३ खर्ब ८ अर्ब पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत्र मसान्त सम्ममा वित्तिय संस्थाको निक्षेप संकलन १२ प्रतिशतले बढेर रु ३ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ ।
नयाँ सिँचाइ आयोजनाहरुबाट ४३,४८५ रोपनी जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुगेको छ। पुराना तथा जीर्ण सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति र नवीकरणबाट २,०३,६७२ रोपनी जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। हाल निर्माणाधीन ३४७ सिँचाइ आयोजनाहरुबाट थप २,९७,८७२ रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ ।
गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दा विद्युत सेवा पुगेका घर परिवार ८२ प्रतिशतवाट बढेर ९८.९ प्रतिशत पुगेको छ । सोमध्ये ९२.७९ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत र अन्यमा सौर्य उर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत सेवाको पहुँच पुर्‍याइएको छ ।
सवारी तथा यातायात सेवा प्रवाह सहज बनाउन ७ जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा ९,६२४ नयाँ लाइसेन्स वितरण तथा ३०, ६५८ लाइसेन्स नवीकरण गरिएको छ।
प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त बाली/वस्तुहरू उत्पादनको लागि गत आ.व. सम्म १,४८९ मोडल फार्म सञ्चालन गरिएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा थप ४५० मोडल फार्म स्थापना तथा विस्तार गर्न सहयोग गरिएको छ।
हालसम्म १,९२९ रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको छ भने थप चालु आ.व. मा ३,००० रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी भइरहेको छ।
प्रदेशमा ३,९५२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, १,११९ कबुलियती वन उपभोक्ता समूह र ३४ वटा धार्मिक वन उपभोक्ता समूह गरी कुल ५,105 वटा वन उपभोक्ता समूह छन् । यी समूहमार्फत कुल ८,६१,००० हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन भएको छ। वन क्षेत्रवाट हालसम्म २०,९३,५७४ क्युफिट काठ, २,८३७ चट्टा दाउरा र ७९,०९० के.जि. जडीबुटी उत्पादन गरिएको छ।२४ वटा समुदायमा आधारित जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन्।
सूचना प्रविधि पार्कको पूर्वाधार निर्माणको लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ जामुनबोटमा ९६ रोपनी जग्गा प्राप्त गरी सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य आरम्भ भएको छ।
“गण्डकी समाज सभ्य समाज” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ६७ वटा माध्यमिक विद्यालयका कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत १८,४५९ जना विद्यार्थीहरुबीच हामी सचेत छौँ अभियान सञ्‍चालन भएको छ।
बिहीबारको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत माग्दा व्यक्त गरेको मन्तव्य
Tags: प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत माग्दा व्यक्त गरेको मन्तव्य
Previous मुस्लिम आयोगका पूर्व सदस्य मियाँको निधन
Next गण्डकी प्रदेश संसद लाईभ